"म र मेरो बाल्यपनको तिहार" - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
जयन्द्र जलन चापागाईं
चाडपर्व भन्ने बितिक्कै उत्साह उमंग बाल मष्तिष्कमा अाउनु स्वाभाविक हो। कसरी खर्चले पुर्‍याउने ?कसरी पाउनाहरुलाई फर्सीयाउने हो भन्ने कुरा त अामाबुबा को मनमा मात्र हुदो रहेछ! हुन पनि हो बिचरा बच्चाहरूलाई के थाहाहोस त ! उमेर नै त्यस्तै हो चकचके चनचले।
मेरो जन्म तेह्रथुम जिल्लाको ईवा हालको अाठराई गाउँपालिकामा भएको हो । पहाडमा जन्मेको मेरो बाल्यकाल पनि पहाडमा नै बित्यो। समय संगै हरेक चाडपर्व पनि स-सगै बित्दै गए । जब म बुझ्ने भए मलाई किन हो किन दसैंले भन्दा तिहारले मनलाई तानिरहेको महसुस हुन्थ्यो । सायद दशैमा छोराहरुले टिका लगाएर पैसा नपाइने मात्र अाशिस पाईने भएर हो की?अन्य कुनै कारणले हो ! बरु तिहार अाएपछि त देउसी खेलेर भएपनि केहिन केहि पैसा कमाइन्छ भन्ने कलिलो सोचले गर्दा हो तिहार नै औधी प्यारो लाग्थ्यो । दसैंको टिका सकिए पछि म अब कति दिनमा तिहार अाउला भन्दै भित्तामा झुन्डियाएको पात्रो हेर्दै दिन गन्थे । मनमनै अोहो! अब यति दिन बाँकी रहेछ भन्दै बिगतका वर्षमा गरेको रमाइलो सम्झदै अाफ्नै संसारमा रमाइ रहेको हुन्थे।
तर दु: ख लाग्दो कुरा चै के हुन्थ्यो भने दसैंको पुर्णिमा पछि र काग तिहार अघि स्कुल लाग्थ्यो । पढ्ने कुरामा दु:ख भन्दा पनि यस्तो चाडपर्वको बेला के स्कुल लगाइ रहेको होला भन्ने मनमनै लाग्थ्यो । स्कुल नजाउन त भन्दा जुन
स्कुलमा म पढ्थे “जलेश्वरी ईङ्लिस स्कुल ” त्यस स्कुलको व्यवस्थापन समितिमा मेरै बाबा हुनुहुन्थ्यो ।
स्कुल नगई त धरै थिएन । अब स्कुल जानु अघिल्लो दिन दसैं अघिबाट नछोएको किताब कापी खोज्दै झोलामा हाल्थे।उमेरले त्यसै सानुमान्छे लुगा चै जहिलै दिदीहरु( शिला , पुष्पा) र ममीले नै धोईदिने गर्नुहुन्थ्यो । त्यो बिचको १० दिनको स्कुलको पढाइ मलाई चै खासै प्रभावकारी लाग्दैन थियो । स्कुल पुग्न घरबाट पैदल १० मिनेट लाग्थ्यो । सवारी साधनको त पहाडमा कुरै भएन। मन मष्तिष्कमा तिहारको रमझम ले गर्दा स्कुल जान मन नभएर होला त्यो १० मिनेट पनि ३० मिनेट झै लाग्थ्यो । अाखिर समयलाई त कसले पो रोक्न सक्ने स्कुल नै लगाए पनि तिहार अाएरै छोड्थ्यो ।
तिहार अाइन जेलमा हाम्रो देउसी खेल्ने टिम पनि तयार भइसक्थ्यो। सबै वर्ष सधै एउटै टिम भन्ने चै हुदैन थियो । मलाई अझै झलझली याद छ हाम्रो टिम ! टिममा कुनै वर्ष भिम उप्रेती दाई , राजु उप्रेती दाई ,साथि जीवन उप्रेती र म हुन्थ्यौ भने कुनै वर्ष साथि पवन उप्रेती , सोभित ईङ्नाम , अभि पराजुली , जीवन लगाएतका साथीभाईहरु हुन्थ्यौ । अन्य साथीहरूको यहाँ नाम छुट्न गए क्षमा प्राथी छु ।
केटाकेटी अवस्थामा रमाइलो गर्न हिडेको भनेता पनि ध्यान चै धेरै पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्नेमा नै हुन्थ्यो । त्यसैले पनि प्रायः हाम्रो टिममा ५/६ जना मात्र हुन्थ्यौ।
जति थोरै भैयो त्यति नै अाफ्नो भागमा पैसा बढी हुन्छ भन्ने मनस्थिति थियो। राती देउसी हिड्ने भनी टर्स लाईट अनि एउटा टेक्ने लौरोको जोरजाम पनि सबैले गरिन्थ्यो ।
लक्ष्मी पूजा धुमधाम संग गरेपछि हाम्रो टिम देउसी खेल्न भनि निस्कन्थ्यो । सानै देखि सबै सँग बोल्न रुचाउने , बोल्न नडराउने , तिखो सोर भएर‌ै होला भिम दाई , राजू दाई र अन्य साथीहरूले पनि देउसी भट्याउने काममा मलाई नै अगाडि सार्नु हुन्थ्यो । मलाई पनि अलेली भट्याउन अाउने हुँदा प्राय जहिल्यै भटियाउनेमा म नै हुन्थे ।
देउसी खेल्ने क्रममा अनेकौं उटपट्याङ गर्दै प्रायः सबै घरमा देउसी खेल्न भ्याउथ्यौ । कस‌ैका बारीका सुन्तला त कसैका उखु चोर्दै खान पनि पछि हटिएन । मलाई अझै याद छ साथी पवनले एउटा घरमा लगभग अाधा घण्टा भट्याउदा पनि घरमा मान्छे हुँदाहुदै पनि भित्रबाट कोही ननिष्के पछि ढोकामा झुन्डियाएको चाबी मलखाडीमा मिल्काई दिएको थियो । देउसी खेल्दै जाँदा बाटोमा खोर्सानी बम , अालु बम पडकाउदै दशैमा हालेर छाडेको लिङ्गे पिङ खेल्दै हिड्थ्यौ । जब कसैकोमा सेलरोटी पकाई रहेको देखिन्थ्यो अनि म भ्याउने श‌‌ैली मै ” अाखुम बाखुम सेल रोटी चाखुम” भन्थे नभन्दै कति घरमा सेल रोटी चाख्न पनि पाईन्थ्यो । लगातार देउसी खेल्ने क्रम जारी नै हुन्थ्यो ।
भट्याउदा भट्याउदै स्वर पुरै बसिसकेको हुन्थ्यो ।
सुकेका मकैका दाना खाँदा स्वर खुल्छ भन्ने सुनेका थियौ। त्यसैले बेलाबेला मकैका दाना खाने पनि गर्थियौ । भाईटिकाको दिन बिहान एउटा गाउँमा भ्याएर टिका लगाउन अाफ्नो अाफ्नो घर जान्थिम अनी फेरी केही समय पछि पुन. हाम्रो टिम खडा भइहाल्थ्यो । निधारमा सप्तरङ्गी टिका गलामा मखमली र सयपत्री फूलका माला लगाएर देउसी भटियाउदै देउसीरे देउसीरे भन्नु को छुट्टै मज्जा हुन्थ्यो । भाईटिका को राति ९/१० बजे सम्म खेलेपछी जम्मा भएको पौसा बाडिन्थ्यो । सबैले हातहातमा पैसा समाए पछि एक अर्काको मुखमा हेर्दै मुसुक्क हाँस्दै गोजीमा पैसा हाल्थ्यौ। तिहार अलिक दिन रहिरहोस झैं लाग्थ्यो तर समय कहाँ रोकिन्थ्यो र।
तिहार सकिएको १०-१५ दिन पछि छातेढुङ्गामा रहेको पोखरी मा. वि मा हरेक वर्ष मनद मेला लाग्थ्यो । उक्त पैसा मेलामा खर्च गर्नुपर्छ भनेर म चै जोगाएर राख्थे । यी माथी उल्लेखित तिहारमा रमाइला गतिविधि अहिले सम्झदा “कहाँ अाउछर घुमेर बालपनको उमेर ” भन्ने गीत अत्यन्त मार्मिक रहेछ भन्ने लाग्छ ।
"म र मेरो बाल्यपनको तिहार"जयन्द्र जलन चापागाईंतिहार